Sumada cusub ee Barça waxaa ka go'an inay casriyaynayso gaashaankeeda | Abuurista khadka tooska ah
Judit Murcia | | General, logos
Naadiga caanka ah ee kubada cagta Barcelona, ​​Barça, ayaa sameysa a maalgashiga sumadda si loo cusbooneysiiyo loona waafajiyo dadweynaha cusub. Isbedelka ugu caansan waxaa lagu arkay gaashaankiisa. La-talinta waxaa fulisay wakaaladda sumadda Summa, oo ku takhasusay istiraatiijiyadda astaanta, aqoonsiga, firfircoonida iyo maaraynta.
Hay'addu waxay iftiimisay u baahan la qabsi waqtiyada cusub, tixgeli cusbooneysiinta gaashaanku waa lama huraan. Naqshaddan cusub kor u qaado midabada buluug iyo casaan; sumcad siinaysaa kubad wuxuuna fududeeyaa qaababka iyo midabada gaashaanka la dhigay.
1 Sharad ku samee naqshadda fidsan ee gaashaankaaga
2 Toddobada isbedel ee gaashaanka Barça
Sharad ku samee naqshadda fidsan ee gaashaankaaga
Iyada oo ujeedadu tahay inay noqoto mid ka mid ah noocyada ugu caansan heer caalami, Barcelona waxaa ka go'an inay sameyso naqshad naqshad fidsan. Waxay dooratay muuqaal isku mid ah ixtiraamaya qaabkeeda iyo nuxurka taas ayaa isaga lagu gartaa
Farqiga u dhexeeya isbeddelka ugu dambeeya ee gaashaanka 2001 waa mid si muuqata u muuqda, waxaana lagu tirin karaa wadar ahaan toddobo isbedel.
Toddobada isbedel ee gaashaanka Barça
Hoos waxaan ku magacaabi doonaa toddobada isbedel ee muuqaalka Barcelona uu ku dhacay xisaab xir cusub.
Waxaan ku bilaabaynaa qorista qoraalka. Ka soo gaabinta ereyga FCB oo ku taal bartamaha gaashaanka, sidan oo kale, waxaan ku guuleysaneynaa in qaybta sare iyo hoose ay si aad ah isugu dhafan yihiin.
La kubbada dhexe ayaa caan noqotay. Waxay u taagan tahay mahadsanid khadadka madow waxayna ku taal meel udub dhexaad u ah.
Se ka qaad dhammaan khadadka gudaha ee gaashaanka. Waxay na siineysaa sawir nadiif ah waxayna u keenaysaa iswaafajinta qaabeynta.
Se yaree wadarta midabada loo isticmaalay toddobo ilaa shan.
Sidii aan ku soo sheegnay qodobkii hore, midabada ayaa yaraaday oo isla sidaas ayaa ku dhacda Jaale. Gaashaankii hore gaashaankiisii ​​waxaa ka muuqday laba midab oo huruud ah oo kala duwan. Xilligan waxaa ka go'an oo keliya kala duwanaan koromato ah.
Isaguba isagay la mid tahay nacaybtire, waxaa lagu mideeyay mid kaliya.
Ugu dambeyntii, ka karbaash calan waxaa loo dhimay wadar ahaan shan.
Taariikhda gudbinta rasmiga ah ayaa xigta 20 bisha Oktoobar taas oo loo soo bandhigi doono si loo ansixiyo xubnaha Naadiga ee Golaha Guddiyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » FC Barcelona ayaa casriyeysay gaashaankeeda
Adobe Photoshop CC wuxuu kudhacayaa ipadka
Magacyo iyo farshaxanno lagu dhiirrigeliyay burburka uu fuliyay Banksy